Xabbad joojinta Suuriya oo la filayo in ay dhaqangasho saacadaha soo socda - BBC News Somali
Xabbad joojinta Suuriya oo la filayo in ay dhaqangasho saacadaha soo socda
Xabbad joojin soconeysa muddo shan saacadood ah oo lagu hakinayo weerarrada dowladda Suuriya ku haysa dhulka ay fallaagadu maamusho ee bariga Quuda ayaa lagu wadaa in ay dhaqangasho saacadaha soo socda.
Xukuumadda Ruushka ayaa amar ku bixisay waxay ugu yeedhay in hawlgallada ay ka wado bariga Quuda ee Suuriya ee ay fallaagadu gacanta ku hayaan loo hakiyo sababo aadamenino dartood, halkaas oo ciidamada dawladda iyo kuwa ay xulafada yihiin duqayn ba'an ku hayeen todobaad iyo dheeraad.
Madaxweyne Putin ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo duqaynta halkaa ka socoto muddo shan saacadood ah maalin walba, si ay taasi ugu suurto geliso dadka rayidka ahi in ay ka baxaan deegaankaa go'doonsan.
Wasaaradda gaashaan dhigga Ruushka ayaa sheegtay in dawladda Suuriya hakinayso weerarka ay aaggaa ku hayso mudadaas la cayimay.
Hase yeeshee mid ka mid ah dadka ku nool bariga Quuda oo la yidha Muayyad ayaa sheegay in ay ku adagtahay in ay rumaystaan maamulka Suuriya iyo Ruushka.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay gargaar degdeg ah u fidiso oo ay kolonyooyin sida gargaar u dirto bariga Quuda isla markaana ay daad gurayso boqolaal qof oo u baahan daryeel caafimaad.
Laakiin xukuumadda Suuriya ayaa ku eedaysay Maraykanka iyo dalalka kale ee gobolka in ay bartilmaameedsanayaan muwaadiniinteeda rayidka ah.
Ilaa iyo haatan ma cadda sida hay'adaha samafalku ay ugu suurtageli doonto in ay cunno iyo dawo gaarsiiso dadka ku go'doonsan bariga Quuda, halkaasi oo qiyaastii 400, 000 oo qof ay wajahayeen duqeymo ba'an.
Mareykanka ayaa Ruushka ugu baaqay in galaangalkiisa siyaasadeed uu u adeegsado dhaqangelinta xabbad joojintii uu ku dhawaaqay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey.